အကြည်တော် ၂၄နာရီအသည်းကွဲ by mgkg0001 363 views
Murann Website Page
1. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 1/23 YOU ARE HERE:: HOME ချည် နှောင်ခြင်းခံနေရသလား - နေ့စဉ်ခွန်အား ချည် နှောင်ခြင်းခံနေရသလား 16.07.2014 ဖတ် ရန်: ဆာ ၁၆း၁-၁၁ ငါသည် တွေ့ကြုံသမျှသော အခြင်းအရာတို့၌ ရောင့် ရဲသောစိတ် ရှိအံ့သောငှာ သင်မိပြီ။ ဖိ ၄း၁၁ သမ္မာကျ မ်းစာ တစ်နှစ်တာ: □ ဆာ ၁၆-၁၇ □ တ ၂၀း ၁-၁၆ ဘိုသီးယက် စ်သည် ၁၆ရာစုနှစ်က အီတလီတော် ဝင် တရားရုံး၌ အထူးကျွမ်းကျ င်သော နိုင်ငံရေးသမားအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည် ။ သို့သော် အကြောင်းမလှစွာဖြင့် အပြစ်လွှတ် ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရခြင်း - ဆရာဇော် ဝင်း နှုတ် ကပတ် တော် တ ၂း၃၈ ပေတရုကလည်း၊ သင်တို့၏အပြစ်ကို လွတ် စေခြင်းငှါ နောင်တရ၍ တယောက် မျှမကြွင်း၊ ယေရှုခရစ်၏... Gospel Interview အင်တာနက် ဗွီဒီယို (မုရန်တင်ပြချက် ) အင်တာနက် - ငါ့ ကိုမစခြင်း အကြောင်းသည် ပေါ်ထွက် ရသောတောင်ရိုးသို့ ငါမျှော် ကြည် ၏၊၊ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီး ကိုဖန်ဆင်းတော် မူသော ထာဝရဘုရား ထံတော် မှငါ့ ကိုမစခြင်းအကြောင်းသည် ပေါ်ထွက် ရ၏၊၊ သင်၏ ခြေကိုချော် စေခြင်းငှါ အခွင့်ပေးတော် မမူ၊၊ သင့်ကိုစောင့်သောသူသည် အိပ်တော် မမူ၊၊ အကယ် စင်စစ် ဣသရေလအမျိုးကိုစောင့်သောသူကိုငိုက် မျ ည်းအိပ်ပျော် ခြင်း ရှိတော် မမူ၊၊ ထာဝရဘုရား သည် သင့်ကိုစောင့်တော် မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ လက်ျာဘက် ၌ရှိသော သင်ခိုလှုံရာအရိပ် ဖြစ်တော် မူ၏၊၊ နေ့အချိန်၌ နေအားဖြင့်၎င်း၊ ညဉ့်အချိန်၌ လအားဖြင့်၎င်း အထိအခိုက် မရှိရာ၊ ထာဝရဘုရားသည် မကောင်းသောအမှုအရာ အလုံးစုံတို့ကိုကွယ် ကာ၍၊ သင်၏ အသက် ကိုစောင့်တော် မူလိမ့်မည် ၊၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ ထွက် ခြင်းနှင့် ဝင်ခြင်းတို့ကိုယခုမှစ၍ အစဉ်မပြတ် စောင့်တော် မူလိမ့်မည် ၊၊ ဆာလံ-၁၂၁ နေ့စဉ်ကျ မ်းစာ DAILY BIBLE ကောလောသဲသြဝါဒစာ ၂:၁၀ အထွဋ်အမြတ် အာဏာစက် ရှိသမျှကို အုပ်စိုးတော် မူသောထိုသခင်၌ သင်တို့သည် စုံလင်ခြင်းရှိကြ၏။ သမ္မာကျ မ်း BURMESE-ENGLISH .....Burmese-English BIBLE Andrew (ဆရာအောင်နိုင်) ပြုစုသည် ။ စာအုပ် (Download 36 lessons) Murann http://muran အသင်းတော် လိပ်စာအချို့ - USA,..Singapore,.. Others.Links ... လင့်ခ်များ www.murann.com/links.htm နောက် ဆုံးတင်ပြချ က် များ LATEST POSTS Thuya Thwin: Communist- Turned-Christian Businessman Monday, July ပင်မစာမျ က် နှာ ၀ိညာဉ်ရေးရာ ရယ် ရွှင်ဘွယ် များ ဆောင်းပါး-၁ ဆောင်းပါး-၂ သခင့်စကား ဓမ္မသီချ င်း သမ္မာကျ မ်းစာ ဗဟုသုတများ LOGIN မုရန် မဂ္ဂဇင်း လွတ် လပ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားရှင် အား ကိုးကွယ် မည် C HRISTIA N EZINE ရှာရန် Tuesday, Jul 15th Last update 08:26:42 AM GMT You, Thida Aung and 166 others like this.Like
2. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 2/23 ဘုရင့်အမျက် တော် ရှပြီး နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရပြီး အကျ ဉ်းချခံ ခဲ့ရသည် ။ သေဒဏ် ချမှတ် မည့် အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်း နေရချိန်တွင် သူ၏ဆင်ခြင်ယူဆချက် ၊ သုံးသပ်ချက် များကိုရေးရန် စာရေးကရိယာများကိုတောင်းခံခဲ့ သည် ။ နောက် ပိုင်းတွင် သူ၏ရေးသားချက် များမှာ နှစ်သိမ့် သက် သာခြင်းကိုပေးသည် ... Read more... မှန်ကန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်တာချီလိတ် မြို့ - ဆရာဦးကျော် ဝင်း ကျ မ်းစာသင်တန်း ၂ရက် လေ့ လာခဲ့ကြတယ် ။ ကျ မ်းစာသင်တန်းရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကတော့ ယုံကြည် သူများကိုဖျက် ဆီးနှောက် ယှက် တဲ့ စာတန်မာနတ် ရဲ့ ပရိယယ် (၄)မျိုးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီ ပရိယယ် (၄)မျိုးကိုကျော် လွှားနိုင်ပြီး ခရစ်ယာန်ခြေလှမ်းအကြောင်း သင်ကြားလေ့ လာခဲ့ကြပါတယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကတည်းက ဖိတ် ထားတဲ့ နယ် သာလန်နဲ့နော် ဝေးကိုမသွားဖြစ်ပဲ၊ ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်လို့ အခုတာချီလိတ် ကို ရောက် လာပါတယ် ။ ကျ နော် တာချီလိတ် မှာ နေခဲ့ပါတယ် ။ ပိုက် ဆံမရှိခဲ့ပါဘူး။ အခုဆိုနိုင်ငံတကာမှာ သွားရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ် ။ ဘုရားလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်တယ် ။ မီဒီယာအကြောင်းကို ဇူလိုင်-၂၀၁၄ သခင့်စကား သက် သေခံချက် မှာ ရေးထားပါတယ် ။ ယုံကြည် သူအချင်းချင်းေ... ဘုရားနှင့်အဆက် မပြတ် ရန် - ကိုမေတ္တာ (သင်းအုပ်ဆရာ) MP3 to listen (ဆရာကိုမေတ္တာ စင်ကာပူမိတ် ဆွေများနှင့် တရားဒေသနာဟောကြားစဉ်) http://mingalaronline.biz/se... ယရမိ- အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်မှု၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ JEREMIAH'S PRAYER OF CONFESSION ယေရမိ- အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်မှု၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ Jeremiah 14:7 Rev. Iv... 14, 2014 ချည် နှောင်ခြင်းခံနေရသလား - နေ့စဉ်ခွန်အား မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအတွက် ဆုတောင်း၊မေတ္တာပို့နေဆဲပါ မှန်ကန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်တာချီလိတ် မြ - ဆရာဦးကျော် ဝင်း ရစ်ယာန် ဘာသာဝင် တို့၏ အမှတ် အသားဖြစ်သည့် ခြောက် ထောင့်ပါ ဒေးဗစ်ကြယ် ကြီး အင်းစိန် MIT ဓမ္မတက္ကသိုလ် က စာပေဟောပြောပွဲ၊ “လူငယ် နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်မှု” - လင်းသိုက် ညွန့် (မြန်မာ့ မြေ) အပြစ်လွှတ် ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရ - ဆရာဇော် ဝင်း Gospel Interview အင်တာနက် ဗွီဒီယို (မုရန်တင်ပြချက် ) ဘရာဇီးကမ္ဘာဖလားပွဲနဲ့ဆူရက် ဇ် Surez Apology, ဝိညာဉ်တော် ? ရန်ကုန်မြို့လယ် ကသမိုင်းဝင်ဂျူးဘုရားကျောင်း - အေးချမ်းမြေ့ (ဧရာဝတီ) ယရမိ- အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်မှု၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ ပညတ် တရား ပြောင်းပြန်အကြောင်း လူတွေရဲ့ နှစ်သိမ့်မှုက ကောင်းပါ၏။ သို့သော် ... သခင့်စကားကာတွန်း ဇွန်၂၀၁၄ သခင့်စကား the Lord's Word ဇွန်၂၀၁၄ HAPPY FATHER'S DAY, ပျော် ရွှင်သောဖခင်များနေ့ဖြစ်ပါစေ ထွန်းတောက် သော မိုဃ်းသောက် ကြယ် The BRIGHT and MORNING STAR - ဆရာစောစံအောင် စိန့်သြဂတ် စတင်း (အေဒီ ၃၅၄-၄၃၀) ST. AUGUSTINE (354-430)
3. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 3/23 ကူညီနိုင်ပါတယ် ။ ဗေရိမြို့နဲ့ သက် သာလောနိမြို့ ၂ခု မိုင်၅၀လောက် ဝေးပါတယ် ။ ဗေရိမြို့သားများက နှုတ် ကပါ... Read more... FACEBOOK GOOGLE TWITTER BUTTONS 1 168Share SPIRITUAL ၀ိညာဉ်ရေးရာ လှပတင့်တယ် သောခြေလှမ်း၊ - Rev Saw Augustus Friday, 28 March 2014 09:37 ကျ မ်းပိုဒ်။ ရောမ ၁၀း၁၄-၁၅ သို့ရာတွင်၊ မယုံကြည် လျှ င် အဘယ် သို့ပဌနာပြုနိုင်မည် နည်း။ သိတင်းမကြားလျှ င် အဘယ် သို့ ယုံကြည် နိုင်မည် နည်း။ ဟောပြောသောသူမရှိလျှ င် အဘယ် သို့ကြားနိုင်မည် နည်း။ လူကိုမစေလွှတ် လျှ င် အဘယ် သို့ဟော ပြောနိုင်မည် နည်း။ ထိုသို့နှင့်အညီကျ မ်းစာလာ... Read more... ချ ည် နှောင်ခြင်းခံနေရသလား - နေ့စဉ်ခွန်အား မှန်ကန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်တာချီလိတ် မြို့ - ဆရာဦးကျော် ဝင်း အပြစ်လွှတ် ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရခြင်း - ဆရာဇော် ဝင်း ယရမိ- အပြစ်ဝန်ချ တောင်းပန်မှု၊ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဆိုသည် မှာ ဥပုဒ်စောင့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည် ။ စစ်မှန်သောယုံကြည် ခြင်း - ဆရာလတ် ယေရှဲ Burmese Sermon "Having True Faith" မတရားသောမေထုန်၊ ညစ်ညူးစကား၊ လိမ်လည် ခြင်းမှာက လွတ် မြောက် နေသူအားလုံး - ဆရာဦးဇော် မင်း ခရစ်ယာန်တို့၏ အခြေခံယုံကြည် ချ က် များ Christian Basic Faith (Anglican Church) SOCIAL GRACES IN AN ANTI-SOCIAL WORLD - Rev Kenny Fam မင်းသား - ရေးသူ၊ လောမဲ ဆောင်းပါးကဏ္ဍများ မှန်ကန်ခြင်းနှင့်ရဲရင့်ခြင်း - သော် တာဆွေ လမ်းပြကြယ် (စင်ကာပူ) စာကြည့် တိုက် နှစ်လည် စာစောင် သင်းအုပ်ဆရာမျက် ပြူးနဲ့ကိုဇောက် ထိုး ကိုယ် တွေ့ဖြစ်ရပ်များ ILBC ဦးတင်မောင်ဝင်း - မြန်မာ့ ပညာရေးကိုကမ္ဘာ့ အဆင့်မြှင့်တင်နေသူတ စာပေးစာယူ၊ အဝေးသင်ဒီပလိုမာကျ မ်းစာသင်ခန်းစာများ Andrew (ဆရာအောင်နိုင်) ပြုစုသည် ။ စာအုပ်ရယူလိုပါက (Download 36 lessons) contact@murann.com .. .Youtube.3min အသစ်သော မွေးဘွားခြင်း (A New Birth, Text & Audo) HYMN ဓမ္မသီချ င်းများ IPHONE မြန်မာစာနဲ့ ဓမ္မသီချင်းများကို iPhone မှာကြည့် နိုင်မယ် ဖြစ်ပါတယ် ။ စမ်းသပ်သီဆိုပြီး မဘူးဘူ ထံကိုကွန်မင့်များပေးကြပါဦး.. Apple Stoo - search "Chee Mwan" and download free Myanmar Hymn, Chee Muan ချီးမွမ်းခြင်း - ဓမ္မသီချင်းများ (ရိုးရာသီချင်းများ) - ချီးမွမ်းကိုးကွယ် ခြင်း (ခေတ် ပေါ်) Praise Worship
4. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 4/23 KNOWLEDGE ဗဟုသုတ မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအတွက် ဆုတောင်း၊ မေတ္တာပို့နေဆဲပါ Tuesday, 15 July 2014 11:06 လက် ရှိမြန်မာ၊ နိုင်ငံရေုးဖြစ်ပျက် မှုများ ပြည် သူ့လွှတ် တော် ဝက် ဆိုဒ်မှာ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား၊ ဟီလာရီကလင်တွန် နဲ့ လွှတ် တော် နယကကြီး သူရဦးရွှေမန်းတို့ ဓါတ် ပုံတွေ့လိုက် မိတယ် ။ အခုတလော နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု ပြင်းထန်လာတယ် ။ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လှုပ်ရှား... Read more... ရစ်ယာန် ဘာသာဝင် တို့၏ အမှတ် အသားဖြစ်သည့် ခြောက် ထောင့်ပါ ဒေးဗစ်ကြယ် ကြီး အင်းစိန် MIT ဓမ္မတက္ကသိုလ် က စာပေဟောပြောပွဲ၊ “လူငယ် နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်မှု” - လင်းသိုက် ညွန့် (မြန်မာ့ မြေ) ရန်ကုန်မြို့လယ် ကသမိုင်းဝင်ဂျူးဘုရားကျောင်း - အေးချ မ်းမြေ့ (ဧရာဝတီ) စိန့်သြဂတ် စတင်း (အေဒီ၃၅၄-၄၃၀) ST. AUGUSTINE (354-430) ILBC ဦးတင်မောင်ဝင်း - မြန်မာ့ ပညာရေးကိုကမ္ဘာ့ အဆင့်မြှင့်တင်နေသူတစ်ဦး မြန်မာပြည် မှာ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘဝ Church Of England Against Halal-Islamization Of UK နောဧခေတ် တွင်ရှိခဲ့သော “နေဖီလင်လူဘီလူး” (NEPHILIM) များ - Pastor Sein Ram မုရန် မြန်မာပြည် ခရီးစဉ် (သင်္ကြန်၊ ဧပြီ၊ မေ -၂၀၁၄) အရည် ချ င်းစစ်ဆေးခြင်း (မြန်မာလူသားအရင်းမြစ်များ) LITERATURE စာပေ ပညတ် တရား ပြောင်းပြန်အကြောင်း Thursday, 26 June 2014 20:01 ဟုတ် တယ် ။ အခန်းခွဲပြီး တင်လို့ရပေမဲ့ တစ်အုပ်လုံး သခင့်စကား the Lord's Word ဇွန်၂၀၁၄ HAPPY FATHER'S DAY, ပျော် ရွှင်သောဖခင်များနေ့ဖြစ်ပါစေ ထွန်းတောက် သော မိုဃ်းသောက် ကြယ် The BRIGHT and MORNING STAR - ဆရာစောစံအောင် မှန်ကန်ခြင်းနှင့်ရဲရင့်ခြင်း - သော် တာဆွေ လမ်းပြကြယ် (စင်ကာပူ) စာကြည့် တိုက် နှစ်လည် စာစောင် သခင့်စကား ဝိညာဉ်ရေးရာစာစောင် မေလ-၂၀၁၄ the Lord's Word 153 - အင်္ဂလိပ် English Hymn Credit , Chee Mwam By Bue Bu (Facebook: KingOfMyHeart View More by This Developer Open iTunes to buy and download apps. သတင်းနှင့်ကြော် ငြာများ NEWS, ADVERTISEMENT သာရေး၊နာရေး၊ အသင်းတော် မိတ် သဟာရ၊ ကြော် ငြာလိုသူများ Comment ကွန်မင့်ရေးထားခဲ့ရန်၊ မုရန်ကြော် ငြာကဏ္ဍတွင် တင်ပြပေးပါမည် ။ **********
5. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 5/23 ၃၂မျက် နှာ တစ်ထိုင်ထဲ ဖတ် ဖို့ တင်လိုက် ပါတယ် ။ အကြောင်းရင်းက ယုံကြည် သူများ၊ အသင်းတော် များ ဝိညာဉ်တော် မပါပဲ ဘာသာရေးနောက် သို့ ပြောင်းပြန်လျှောက် ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ် ။ အရင်ဖတ် ကြည့် ကြပါ။ စာအုပ်ထုတ် ခ... Read more... ရေးသူ- ဒေါက် တာဖေမြတ် ဝင်း ငရဲနှင့်ကောင်းကင်ဘုံ တကယ် ရှိပါသလားနှင့်စာအုပ်များ “ကျွန်တော် နှင့်ယမ်းငွေ့ဝေသော ကာလများ” - ကိုမေတ္တာ (သင်းအုပ်ဆရာ) လောကဧည့် သည် Pilgrim's Progress - Christian Literature Illustration (Myanmar-English) မေတ္တာဆုံးရှုံးသွားသူမြန်မာများအကြောင်း (Love of God, need) The Lord's Lord (Mar-2014) ခရစ်တော် ၏ရုပ်ပုံလွှာ-၁၄ ( ငါဖြစ်၏ ) ဘာသာပြန် - မင်းအောင်သက် လွင် စာရိတ္တမြှင့်တင်ပေးသော ဂျူးဒစ်ဝတ္တုအကျ ဉ်း - ထာဝရဘုရား၏လူ။ (The Book of Judith) HUMOR/ CARTOON ရယ် ရွှင်ဘွယ် များ Read More Add Comment (0) Hits: 439 သခင့်စကားကာတွန်း ဇွန်၂၀၁၄ Monday, 23 June 2014 23:10 Read more... သင်းအုပ်ဆရာမျ က် ပြူးနဲ့ကိုဇောက် ထိုး ကိုယ် တွေ့ဖြစ်ရပ်များ လောကကြီးကိုရောက် လာတဲ့ သင် သခင့်စကား Mar 2014 (ကာတွန်း - မင်းအောင်သက် လွင်) ငါ့ မှာရှိတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲက မင်းကြိုက် တာကိုပေးမယ် .. ဒံယေသ နှင့် တစ်မျ က် နှာဓမ္မဟာသများ၊ - ဆရာဆိုး ဒီနှစ်ခရစ်စမတ် မှာ (ကာတွန်းနှင့်ရယ် စရာ) အပြစ်များကိုဆေးကြောသောနေ့ .. လူလိမ္မာဆုတောင်း၊ ကာတွန်း-မင်းအောင်သက် လွင် ဂွမ်....Cartoon - the Lord's Word 146 စာတန်၏ ဂျီသရီးကျ ည် ဆံအကြောင်း DAILY SCRIPTURE နေ့စဉ်နှုတ် ကပတ် တော် ငြိမ်ဝပ်စွာနေချိန် ၌ ပဌနာတော် ကျ မ်းစာလေ့ လာခြင်း (6 days - Quiet Time by Rick Warren) Monday, 31 January 2011 14:05 နိဒါန်း ကိုယ် တော် ၏ ကိုင်ဖမ်းမှု- Our Daily Bread (31-Dec-2013) နေ့စဉ်မျှော် လင့်ချ က် - ကျ မ်းပိုဒ်များအလွတ် ရအောင်လုပ်နည်းအုပ်စုအားဖြင့် ဆောင်ရွက် ပါ (DailyHope) လူများအပေါ်ယုံကြည် အားကိုးခြင်းနှင့်ဘုရားသခင် TODAY’S SCRIPTURE သင်ဆုတောင်းစဉ်တိတ် ဆိတ် ငြိမ်သက် မှုကိုပြုစုပျိုးထောင်ပါ 03/04 Click to see U Nyunt Hla (rev)'s Praise ********** Dear brothers and sisters in Christ, Our beloved Dr. Je Naw went home to be with The Lord on February 2nd 2014. I will let you all know the funeral schedules when they are available. There will be comfort prayer services for bereaved family members every night from . The address is 2468 Solar Cir, Union City, CA 94587. Give your time this evening to go to Ma Dorothy's home as FBBC family for comforting service. "Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn." (Romans ) In Christ, Pastor Latt Yishey ********** ခရစ်တော် ၌ ချစ်မိတ် ဆွေများခင်ဗျား- ရန်ကုန် ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိ မြန်မာပြည် ကျ မ်းစာအသင်း အရောင်းခန်းမတွင် Missionary ဆရာကြီး ယုဒသန် မြန်မာပြည် ရောက် ရှိခဲ့ခြင်း နှစ် 7:00 pm February 3-6, 2014 12:15
6. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 6/23 အခြေနေတိုင်း၊ နေ့ရက် တိုင်း ဘုရားရှင်ကိုသာ အကြီးကြီးဖြစ်စေရမည် ။ သို့ဖြစ်လျှင် ပြဿနာများသည် ဘုရားရှင်အားဖြင့် သေးသေးသွားလိမ့်မယ် ။ Rick Warren ရစ်ဝါရင်၏ Jan 25, 2010 ရက် နေ့ ဆရာကြီးရစ်ဝါရင်၏ နေ့စဉ်မျှော် လင့်ခြင်းတွင် ပဌနာတော် ဟုကျွ န်ုပ်တို့ ခေါ်ဝေ... Read more... သင်၏ ဆုတောင်းချ က် များ အဖြေ 02/04 ဘုရားပြောစကားကိုစောင့်ကြည့် ပါ 31/03 အကြမ်းဖက် နည်းကိုအောင်နိုင်ခြင်း ဓမ္မပညာအထောက် အကူပြုလစဉ်စာစောင် - ဇွန်လ ၂၀၁၃ Pulpit , June2013 ဖွင့်ထားသောတံခါးနှင့်ပိတ် ထားသောတံခါများ LIFE EXPERIENCE / TESTIMONY ဘ၀အတွေ့အကြုံ Thuya Thwin: Communist-Turned- Christian Businessman Monday, July 14, 2014 Wednesday, 16 July 2014 10:26 (Thuya Thwin’s short autobiography from Ko Zaw Aung’s email on 25 January 2014.) This is the autobiography of my strange or Gospel Interview အင်တာနက် ဗွီဒီယို(မုရန်တင်ပြချ က် ) ဘရာဇီးကမ္ဘာဖလားပွဲနဲ့ဆူရက် ဇ် Surez Apology, ဝိညာဉ်တော် ? လူတွေရဲ့ နှစ်သိမ့်မှုက ကောင်းပါ၏။ သို့သော် ... တရုပ်ပြည် ၏ ဘီလီဂရေဟန် John Sung (1901 - 1944) လီဆူဦးအောင်သိန်းနှင့်ဇနီးသည် တို့ စင်ကာပူ ဆုတောင်းဝတ် ပြုပွဲ 10 Mar 2014 လီစူးမိုးကုတ် လောပန် ဦးအောင်သိန်း သက် သေခံချ က် မျိုးဆက် များရဲ့ကျိန်စာ - ဆရာမလုလုတင် သက် သေခံချ က် ၊ God’s Blessings ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် များ - ကြည် ကြည် ဋ္ဌေး ဆရာနောနော (ဒလအသင်းတော် )၊ ဆရာခင် (Little Myanmar, Singapore), HIV Mission - Feb2014 ကျော် ဦးသက် သက် သေခံခြင်း - ဆရာစိုင်းအေး ၂၀၀ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အထူးထုတ် ဝေ လိုက် သော ဗမာကျ မ်းစာအုပ် Holy Bible အငယ် စားလေး (၄x၆ လက် မအရွယ် ခန့်) ငွေ ၁၀၀၀/- ဖြင့် ရောင်းချလျ က် ရှိပြီး ၀ယ် ယူရရှိနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ။ မြင့်အောင် ********** MCA Evangelist Crusade6December 2013 Today is 2nd day of MCA Evangelist Crusade. By His Grace alone, 192 people accepted Jesus Christ and many got Baptized just now. Rejoice with us. Chokee Saya U Zaw Min (Rev) *********** သင်းအုပ်လုပ်ငန်း Pastor Ministry (Article) ဆန်ကျုံနုံးပြုစုသည် ။ 106 page, Download here 14MB ********** ဆရာယုဒဿန်ရဲ့ ဘ၀ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ် သက် လို့ TO THE GOLDEN SHORE စာအုပ်ကိုဗိုလ် မှူးကြီး မောင်မောင်ရှင် ( အငြိမ်းစား )
7. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 7/23 extraordinary life as I recalled it recently. My parents were devout Buddhists and I grew up asadevout Buddhist boy. But I en... Read more... TRAVELLER RECORD ခရီးသွားမှတ် တမ်း Reliving 1973 Kachin Christmas Eve in New York City Wednesday, 01 January 2014 16:33 New York City's Skyline. (RE-POST OF MY "RELIVING 1973 KACHIN CHRISTMAS EVE IN NEW YORK CITY" FROM 2011.) The Big Apple or the New York City isawholesomely overwhelming town forasimple jungle boy like me. Especially the enormous Romanesque facades ... Read more... သက် သေခံချ က် - မြန်မာပြည် အလည် ပြန်ခရီးစဉ်နှင့်ခရစ်စမတ် ဆုမွန် (Aung Lwin) ပိုးကရင်ခရစ်စမတ် ပွဲတော် စတင်ကြပြီ...Agape Christmas! မြန်မာများ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းနေသော ကာစီနိုသင်္ဘောကြီး m/v Amusement World, Penang, Malaysia ပီနန်မြို.မှမိုးရက် များ(၁၀) (၁၂) Rev.Cho အမေရိကန်မှချ င်းလူမျိုးများ THE KAREN TODAY and Christian Churches in USA ကချ င် ခရစ်ယာန် အသင်းတော် များ - အမေရိကား၊ ဂျ ပန်၊ စင်ကာပူ သူနာပြုသင်တန်းဆင်းပွဲ အမေရိကားရောက် မြန်မာများအတွက် ဆရာဇော် သူလင်းဒေသနာ ရှမ်းပြည် နယ် ၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအတွက် အင်းလေးကန်ခရီးစဉ် BIBLE STUDY ကျ မ်းစာလေ့ လာခြင်း ဘဝပြဿနာများအတွက် လမ်းညွှန်အကြံပြုသည့်ဘုရားအလိုတော် အတိုင်း ကိုးကွယ် ကြသူများ - အန်ဒရူး မှရွှေပြည် တော် ကမ်းခြေသို့ အမည် ဖြင့် ဘာသာပြန်ဆို ရေးသားထုတ် ဝေပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ ရန်ကုန်တွင်ဝယ် ယူရရှိ၊ ဖတ် ရှုနိုင်ပါသည် ။ မုရန်၊ JBC နှင့်ပြည် ပအသင်းတော် များ စာကြည့် တိုက် များအတွက် ဝယ် ယူလှုဒါန်း၊ ပို့ပေးမည့် မိတ် ဆွေများကို ဖိတ် ခေါ်ပါသည် ။ (comment by Ko Thet) ********** ၁၀.၁၀.၂၀၁၃ နေရာ ဟာလေလုယအသင်းတော် ချီးမွမ်းဝတ် ပြုပွဲဖိတ် ခေါ်ခြင်း။ အမရပူရ အချိန် ၁၀း၀၀ နာ၇ီ (contact to Pastor) ********** Marantha Fellowship FACEBOOK https://www.facebook.com/Mara ############# ၂၁ရာစုမီဒီယာခေတ် မှာ မှန်ကန်တဲ့ ဧ၀ံဂေလိတရား Gospel of Peace သက် သေခံ၊ဒေသနာ။ ဆရာချိုမနားလိန်း ၂၃-၅-၂၀၁၃ COS Church http://murann.com/mp3/chomanaling/2 **********
8. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 8/23 သမ္မာကျ မ်းလမ်းညွှန်များ - ဆရာအော် နယ် ညို (Rev, Dr) Saturday, 08 February 2014 07:05 ဘဝပြဿနာများအတွက် လမ်းညွှန်အကြံပြုသည့် သမ္မာကျ မ်းလမ်းညွှန်များ စကားချီး ၁၀၀၈ ခုနှစ်တွင် သြစတြေးလျားနိုင်ငံသို့ သာသနာခရိးသွားရောက် ရာတွင် Rev Howard Hodgson က ကျွ န်တော့ ကိုစာအုပ်တစ်အုပ် လက် ဆောင်ပေးပါသည် ။ ဖတ် ကြည့် ရာ ကျ မ်းစာသင်တန်းပေးရန်နှင့် ဘဝပြဿနာ တွေ့ကြ... Read more... အသစ်သော မွေးဘွားခြင်း - A New Birth (ဆရာအောင်နိုင် HCF Bible Study) သင်ခန်းစာ (၂၀) မင်္ဂလာရှိသော ကယ် တင်ခြင်းစိတ် ချ မှု သင်ခန်းစာ (၁၉) ကယ် တင်ခြင်းနှင့်ဆုလဒ် New Life in Christ , 01 ဂတိတော် နှင့်ဆိုင်သော ကယ် တင်ရှင် ယေရှုခရစ်Jesus Christ The Promised Savior သင်ခန်းစာ (၁) ခရစ်စမတ် တွင်မွေးဖွားသောယေရှုအကြောင်းကျ မ်းစာလေ့ လာခြင်း သင်ခန်းစာ အမှတ် (9) ယေရှုခရစ်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက် တော် မူခြင်း ၄င်း၏ခိုင်လုံသောအထောက် အထား တန်ခိုးနှင့် ရည် ရွယ် ချ က် - ဆရာအောင်နို င် (Bible Study) Bible Gateway - အဖတ် အများဆုံးကျ မ်းပိုဒ်၅ခု အချ င်းချ င်း ချ စ်ရမည် Practical Christian Living Course L21 ဥာဏ် ပညာရှိစွာ ရွေးချ ယ် ခြင်း Lesson 16: Choosing Wisely POEM ကဗျာ၊သီဆိုချီးမွမ်းခြင်း အစဉ်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက် ရွှင်လန်းမည် Sunday, 02 March 2014 23:54 ၁။ အစဉ်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက် ရွှင်လန်းမည် သက် ထာဝရ အမှန်ရလိမ့်မည် သခင်ခရစ်တော် ၊ မြတ် ကိုယုံသူများ ဆက် ဆက် ရကြ၊ သက် မြတ် ထာဝရ ထပ်ဆိုရန်။ ဝမ်းမြောက် လျှ က် ၊ ရွှင်လန်းလျှ က် ပြတ် မလပ်အစဉ်၊ ချ စ်ခြင်းမေတ္တာ - ဆရာဦးညွန့်လှ ချီးမွှမ်းခြင်းတေးရေး၊ ဂီတဆရာ ဦးစောရူဘီRuby မိသားစု (မိုးကုတ် ) (ကြီးမြတ် လှသည့် အကြောင်းကို) - BCFC (Daily City) Christmas - O Holy Night , Hillsong သီဆိုချီးမွမ်းခြင်း ဓမ္မသီချ င်းအပုဒ်၂၀ (murann.com/hymn20.htm) ကောင်းကြီးရေတွက် Count your blessings ချီးမွမ်းခြင်းသီချ င်း (ချီးမွမ်းလော့ ၊ ယုဒသန်နှစ်၂၀၀အထိမ်အမှတ် သီချ င်း) ကျေးဇူးတော် ခွက် ဖလား လျှံလျှ က် ရှိပါ၏ ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏ကျောက် ၊ ငါ၏မြို့ရိုး၊ ငါပိတ် သော တံခါးကိုဘယ် သူမှမဖွင့်နိုင် kachin bible iPhone Karen Bible KingOfMyHeart ********* မြန်မာကျ မ်းစာ iPhone, Android App ဖတ် ရှုရန် KingOfMyHeart နှင့် မိတ် ဆွေများ လုပ်ဆောင်လျှ က် ရှိပါတယ် ။ ကချင်၊ ကရင် (စကော၊ပိုး) ကျ မ်းစာ Text with any fonts, Hymn (old and modern) များလုပ်ဆောင်လျှ က် ရှိပါတယ် ။ Download from Apple Store search "chee mwan"
9. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 9/23 ဝမ်းမြောက် လျှ က် ရွှင်လန်း ဝမ်းမြောက် လျှ က် ၊ ရွှင်လန်းလျှ က် ဘုန်းပွင့်နေ့ကိုစဉ် ရှေ့မြင်လျှ ... Read more... သက် သေခံချ က် များ TESTIMONY (RANDOM ARTICLE) ယေရုဆလင်မြို အဖြစ်ပျ က် နှင့်စာလျှ င် ဘာမှမဖြစ်လောက် သေးပါ။ ဆရာ. Lagwi Bawm Luk နှင် ဆရာမြင့်စိုး (BCFF, Daly City, 14-Sep-2008) ပြန်လည် တင်ပြသည် ။ ယေရမိမြည် တမ်း ၃း ၂၁ -၂၅ "ထိုသို့ အကျွ နိုပ်တို့ စိတ် နှလုံးသည် ဆင်ခြင်၍ သတိရသောအခါ မျှော် လင့်စရာ အခွင့်ရှိပါသည် " ယေရုဆလင်မြို့ကိုဖျက် ဆီးခံရသောအခါ ပရောဖက် ကြီး ယေရမိ မျက် ရည် ကျ ပြီး မြည် တမ်းရသည် ။ ယေရုဆလင်မြို့ကြီးသည် မြောက် ဖက် မှလွဲလျှ င် ဘက် အားလုံး ချိုင့်ဝှမ်းများဖြင့် ရန်သူများကိုသဘာဝဖြင့် ကာကွယ် ထားပါသည် ။ သို့သော် လည်းမြောက် ဖက် မှလာသော ရန်သူများကိုဘုရားသခင်စေလွှတ် ခြင်းဖြင့် ဖျက် ဆီးခြင်းခံရပါသည် ။ မြို့သားများ နှိပ်စက် ခံရခြင်း၊ မိန်းမသည် မိမိရင်သွေး၊ မိမိချီပိုက် သောသားကိုစားရပါမည် လော။ ယဇ်ပရောဟိတ် နှင့် ပရောဖက် သည် ထာဝရဘုရား၏ သန့်ရှင်းရာ ဌာနတော် ၌ အသေသတ် ခြင်းကိုခံရပါမည် လော၊ လူအကြီးအငယ် တို့ တုံးလုံးနေရကြပါ၏၊ အကျွ နိုပ်တို့ အပျိုနှင့်လူပျိုတို့သည် ထားဖြင့်သေကြရပါပြီ။ မြို့တွင် မြေခွေးများဖြင့် ပြည့် သွားသည် စသဖြင့် ဖျက် ဆီးခံရခြင်းများကိုဖေါ်ပြထားပါသည် ။ လက် ရှိလောကနှင့်တူသည် ဟုထင်မိပါသည် ။ ကချင်သတင်းဌာနအနေနှင့် အသင်းတော် တခုကိုအစိုးရမှဖြိုဖျက် သိမ်းရန် သဘောတူကြောင်းကိုကချင်သင်းအုပ်ဆရာတပါးက ထောက် ခံစာကြေငြာခြင်းအကြောင်း သတင်းထည့် ရေးပါသည် ။ စိတ် ထဲတွင် ထိုသို့အမည် နှင့် ရေးထားခြင်းအတွက် တမျိုးတမည် ခံစားရင်း မိမိမောင်းသော ကား အခြားသူနှင့်တိုက် မိခြင်းဖြစ်ခဲ့သည် ။ ********** HCF Myanmar (Singapore) http://hcfsg.blogspot.com/ ********** မုရန်(၄)၊ နေ့စဉ်မျှော် လင့်ချက် စာအုပ်များ မြန်မာကျ မ်းစာအသင်း၊ ဆူလေဘုရားလမ်း၊ မြေညီထပ်တွင်ရယူနိုင်သည် ။ မုရန်(၄) မဂ္ဂဇင်း Oct-2012 ရန်ကုန်တွင်ထွက် ပြီ။ စင်ကာပူပင်နီစူလာ #04-03 တွင်ရယူပါ။ Download - Click Here နေ့စဉ်မျှော် လင့်ချက် ၁၀၀ (Rick Warren) dailyhope.100.pdf **********
10. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 10/23 ထိုသင်းအုပ်ဆရာအကြောင်း သတင်းရေး၍ ယာဉ်တိုက် မှုဖြစ်ရသလား ထင်မိသော် လည်းမဟုတ် နိုင်ပါ။ မှန်ကန်သည့် သတင်းကိုရေးသောကြောင့် ချော် လဲခြင်းဖြစ်သကဲ့ သို့ ဖြစ်ပါသည် ။ အချို့သောသူများသည် အခက် အခဲများတွေ့ရသောအခါ စိတ် ပျက် ခြင်းများစွာတွေ့ရသည် ။ ကားတိုက် ခြင်း၊ နေစရာအိမ်မရှိတော့ ခြင်း၊ နာမကျ န်းဖြစ်လာခြင်း၊ ဆေးရုံတက် ခြင်း။ အလုပ်ပြုတ် သွားခြင်း၊ ဆေးရုံမှာ Bill ငွေတောင်းခံလွှာ များစွာရောက် လာခြင်း စသဖြင့် အခက် အခဲများတွေ့လာသောအခါ ၄င်းအဖြစ်အပျက် များသည် ခြေချော် ကျ ခြင်းကဲ့ သို့ ခံယူပြီး၊ အလိုတော် အတိုင်း ခံလိုက် ရန်သာဖြစ်ပါသည် ။ သူများ ခံရစဉ်တွင် ဘုန်းဂုဏ် တော် ထင်ရှားစေခြင်းအတွက် ချီးမွမ်းခံယူရန် ပြောနိုင်သော် လည်းကိုယ် တိုင်ခံလိုက် ရစဉ်တွင် ဘာမှမပြောနိုင်တော့ ပါ။ ကျေးဇူးတော် လည်းမချီးမွမ်းနိုင်တော့ ပါ။ သို့သော် နှလုံးသားတွင်း ဘုရားသခင်ရှိနေပါက လောက ဒုက္ခများတွင် ကျေးဇူးတော် ကိုချီးမွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည် ။ ဘုရားသခင်ကိုမျှော် လင့်သောသူများသည် ငြိမ်သက် ခြင်းကိုရပါသည် ။ ဟေရှာရ ၄၀ တွင် ထာဝရဘုရားကိုမျှော် လင့်သောသူတို့မူကား အားပြည့် ကြလိမ့်မည် ။ ရွှေလင်းတကဲ့ သို့ မိမိတို့ အတောင်ကိုအသစ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည် ၊ ပြေးသော် လည်းမပင်ပန်း၊ ခရီးသွားသော် လည်းမမောကြ။ မိမိတို့ ဘ၀တွင် မျှော် လင့်ခြင်းများနှင့် အသက် ရှင်နေရပါသည် ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တွင် အိမ်ခြေမရှိသူHomeless များစွာ ရှိပြီး လူများထံမှတောင်းစားနေသည် ကိုတွေ့ရသည် ။ ထိုသူများ ဆိုင်းဘုတ် တခုကို ထောင်ထားသည် ကိုကြည့် မိရာ Homeless but not Hopeless ဟုရေးထားသည် ကို မှတ် သားမိပါသည် ။ ကျွ နိုပ်တို့ ခံရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများသည် ယေရုဆလင်မြို အဖြစ်ပျက် နှင့်စာလျှ င် ဘာမှ မဖြစ်လောက် သေးပါ။ သို့သော် မျှော် လင့်ချက် ရှိပါသည် ။ A slip, NotaFall ဟူသော ဒေသနာကိုအခက် အခဲများတွေ့နေသူများ အတွက် ခြေချော် ခြင်းပုံပမာနှင့်ယှဉ်ပြီး "ကမ္ဘာကိုပြောင်းလဲ ရန်ရည် ရွယ် လုပ်ဆောင်သူ၏ သေခါနီးမှမိမိကိုယ် ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဖို့ သတိရခြင်းဥပမာ" နှင့် ယေရမိမြည် တမ်း ကဗျာ၅ပုဒ်အကြောင်း အားပေးပြောကြားသွားခဲ့ပါသည် ။ Praise Songs (Web Link) မှတ် ချက် ။ ဆရာဘောင်လုLagwi Bawm Luk သည် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် နှစ်အတန်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး အမေရိကားသို့ ပြောင်းရွေ့အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည် ။ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဂျ ပ်ဆန်မြန်မာနှစ်ခြင်းအသင်းတော် မှဆရာသြဂတ် စတပ် မှ ဆရာဘောင်လုတို့ မင်္ဂလာပွဲကိုစင်ကာပူနိုင်ငံ ကပ်ဘာကမ် ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် တွင် လက် ထပ်ထိမ်းမြှားပေးခဲ့ပါသည် ။ ယခုအခါ (၂၀၀၉) ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဒေလီစီးတီးမြန်မာအသင်းတော် BCFF တွင်အမှုတော် ထမ်းဆောင်လျှ က် ရှိပါသည် ။ JBCS ဆရာစောသြဂတ် စတတ် ၏ နှလုံးသားအိမ်စာစုများမှအချို့နှင့် မီဒီယာဆောာင်းပါးအချို့ Book Review - Click Here Download ************ ဆရာချိုမနားလိန်း (Dr. Rev, COS စင်ကာပူမှတ် တမ်း) ဆရာပါနီမောင် သစ်နှစ်နှုတ် ခွန်ဆက် စာ Click Here to View အားကိုးရာမဲ့ချိန် ဖတ် ရန်ကျ မ်းပိုဒ်များ HELPLESS.TIME Bible Verses for Helpless Time အားကိုးရာမဲ့ချိန် ဖတ် ရန်ကျ မ်းပိုဒ်များ (Click Here) murann.com/helpless သင်ဖာသာလုပ်နိုင်တယ် ဆိုရင်- ယေရှုမလိုပါ။ ဘယ် လိုမှမတတ် နိုင်တဲ့ အခြေနေရောက် ရင်- ယေရှုဘုရားကိုခေါ်ပါ။ စမ်းကြည့် ပါ..မိတ် ဆွေ။ Share 1 မုရန်ဖေ့စ်ဘုတ် FACEBOOK
11. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 11/23 Daly City BCFF New Year 2009 မှတ် ချက် ။ ဆရာလုခ် (Bawn Luk Lagwi @ Ba Aung) BCFF Daily City Burmese Fellowship Ordination အခန်းအနားကို25-March 2012 6pm (Sunday) တွင် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ကိုးရီးယားနှစ်ခြင်းအသင်းတော် တခုKorean First Baptist Church of San Francisco, 220 Avalon Drive, CA 94015 Contact: 1 (510) 789 9275, 1(650) 515 1434 တွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည် ။ အားလုံးလာနိုင်သူများအတွက် ဆရာလုခ် ကိုယ် စားဖိတ် ကြားပါသည် ။ ဆရာလုခ်သည် ဒေလီစီးတီးမြိုရှိလူသာရီယန်အသင်းတော် တွင် မြန်မာမိသားစုမိတ် သဟာရကိုဆရာ၆ပါးဖြင့် ၀တ် ပြုကိုးကွယ် ခဲ့ကြသည် မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်သည် ။ ၂၀၀၈တွင် ဆရာဦးဘရွှေ၊ ဆရာဦးမြအေး၊ ဆရာမဒေါ်ခရစ်စတင်းအန်း၊ ဆရာဆလိုင်းမြင့်စိုး၊ ဆရာမတ် မို၊ ဆရာဘောင်လုခ် .. ၆ပါးတို့ဖြင့် ကိုးကွယ် ၀တ် ပြုခဲ့သောအသင်းတော် တခုဖြစ်သည် ။ ဆရာလုခ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုသို့ ရောက် ပြီး၊ ကချင်လူမျိုးစုများနှင့် နှစ်စဉ် ကချင်အခန်းအနား၊ ကိုးကွယ် ၀တ် ပြုခြင်းများ၊ လူမှုရေးများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင်လည်းတက် ကြွ၊နိုးထစွာနှင့် ပါဝင်ကူညီလေ့ ရှိပါသည် ။ ကချင်တူဒေး အဇွဲ့အားဖြင့် စည်းရုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည် ။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုBaptist Seminary မှအချိန်ပြည့် M.Div ဆည်းပူး၊ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည် ။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် တဦးတည်းနေထိုင်သော် လည်းစင်ကာပူ၊ကချင်မိတ် သာဟာရတွင် လက် ထပ်ခဲ့သော သူ၏ဇနီးနှင့် သားငယ် တို့ရှိရာ ထိုင်းနီုင်ငံသို့ နှစ်စဉ်သွားရောက် တွေ့ဆုံလေ့ ရှိသည် ။ ၂၀၁၀တွင် ၁၀စုနှစ်ခွဲခွာနေထိုင်ခဲ့ရသော ဆရာလုခ်မိသားစု၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် ပြန်လည် ဆုံစည်းနေထိုင်ရပြီနောက် ၊ D.Min မာစတာဘွဲ့အတွက် ဆက် လက် ဆည်းပူးလျှ က် ရှိသည် ။ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းပါသည် ။ ဆရာဘောင်လု၏ သိက္ခာတင် အခမ်းအနားအတွက် အားလုံးသတိရဆုတောင်းပေးပါရန် နာမတော် အားဖြင့် ဇော် အောာင် (မုရန်၊ အယ် ဒီတာအဖွဲ့) facebook.com/murann.ezine ညစဉ်ခွန်အား(ဆိုး) မုရန်အစ-၀ိညာဉ်သစ်မှ2010 နေ့စဉ်ခွန်အား(DAILY.BREAD) ဟောပြောချ က် များ VIDEO, AUDIO Burmese-English BIBLE MP3.အသံထွက် ကျ မ်းစာ Click Here ဟောပြောချက် များ Video, Audio - ယုဒဿန်အသင်းတော် (Sg) - အမ်စီအေအသင်းတော် (Bk) - MCA 2011 - အက် ဖ်ဘီဘီစီ(S.F) .. Video.Blip - ဆရာလတ် ယေရှဲ Rev.Dr (2011) - ဦးခမ်အာရိုးမ(W.DC).. (ဒိန်းမတ် ) .. - Toronto.TSMC.. .. USTREAM - မီဒီယာ (BB) Archived - MMCF, KL (Malaysia) မလေးရှားမြန်မာ - ကျ မ်းစာလေ့ လာနည်း........ ကျ မ်းစာပရိုဂျက် 2011 အသင်းတော် လိပ်စာအချို့ - USA,.. Singapore,..
12. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 12/23 ဝိညာဉ်ရေးရာ SPIRITUAL (RANDOM ARTICLE) ဝိညာဉ်ခရီးသွားမှတ် တမ်း (၂) - ဒေါက် တာဖေမြတ် ဝင်း အပိုင်း(၁)တွင် မြန်မာပြည် မှအစပြုခဲ့သော ဝိညာဉ်ခရီးသွားအပိုင်း(၁)ဖြစ်ပါသည် ။ ဆရာဒေါက် တာဖေမြတ် ဝင်း စာအုပ် အစ-အဆုံး အခန်းပေါင်း (၄၀) - စာမျက် နှာ ၄၁၆ ရှိပါသည် ။ အခန်း(၂-၇)အထိဖတ် ရှုလိုသူများအတွက် PDF ဖိုင် နှင့် စာမြည်းရေးပေးပို့လိုက် ပါသည် ။ ပါပူးဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ (အာရှ) မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် ဂျီကို-ဆလမ်ဘာဂျာ ရေနံရှာဖွေရေးကုမ္မဏီဖြင့် မြန်မာပြည် တွင် ဆရာဝန်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ပြီး၊ တစ်နှစ်အကြာ ပါပူးဝါနယူးဂီနီသို့ စတင်ပါသည် ။ လူတိုင်း နေ့စဉ် တစ်နာရီဘုရားအတွက် သီးသန့်အချိန်ပေးသင့်ကြောင်း၊ ဘုရားကျောင်းအချိန်များအပြင်ဘက် အလုပ်ချိန်တွင်လည်းဘုရားနှင့်အေးဆေးစွာ မိတ် သဟာရဖွဲ့မည့် အချိန်များကိုဆိုလိုပါသည် ။ နားခိုရန်ဖြစသည် ။ စင်ကာပူကိုဖြတ် သန်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝက် ကျ ယ် ဝန်းသော၊ လူဦးရေ (၃)သန်းရှိသည့် ပါပူးဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ မောရက် စ်ဘီမြို့မှလေယဉ်ငယ် ဖြင့် တောတွင်းစခန်းသို့ ရောက် ရှိ၊ လုပ်ကိုင်ရပါသည် ။ (၃)ပတ် လုပ်ပြီး မြန်မာပြည် (၁)ပတ် ပြန်နားရသည် ။ အလုပ်အတူလုပ်သူအများစုမှာ ပညာတတ် မဟုတ် ၊ ဝင်ငွေကောင်းပြီး လုပ်ကိုင်ပြီး၊ ဘီယာသောက် ၊ ပျော် အောင်နေကြရသည် ။ Others.Links ... Catholic Mandalay.Youth သိင်္ခါရမှထာဝရသို့ (MP3)-20 * သြဇိမင်းဘုရားကိုမြင်သကဲ့ သို့ တကယ် မြင်ရန်၊ (မိမိ၏ စင်ကာပူမှာသာတဲ့ လကဲ့ သို့ ဘ၀သက် သေခံချက် ) - Rev Saw Augustus 17-Feb-2012 * သန့်ရှင်းမှု၊စင်ကြယ် မှု၊ ဖြောင့်မတ် မှုများ - ဆရာဦးဇော် မင်း(MCA Bangkok) 19-Aug-2012 * အံ့ သြ၀မ်းမြောက် ဘွယ် ရာ ဧ၀ံဂေလိသတင်းကောင်း (ဦးမျိုးချစ်၊ အရှေ့ဖျားအသံ) * ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများမှယခုဘ၀၊ နောင်ဘ၀ လွတ် ကင်းရေး ဦးတင်မောင်ထွန်း (Rev.Dr) 23-Jan-2011 * သန့်ရှင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားထံဒူးထောက် ဆပ်ကပ်ရာမှ မင်္ဂလာရှိသောအသက် တာရရှိခြင်း ဆရာဒေးဗစ်လား 19-June-2011 (Bangkok) * ဧဝံဂေလိသည် သတင်းကောင်း- (သခင်ယေရှု)ဖြစ်သည် ၊ ငွေကြေးနှင့်ကျ မ်းမာရေး၊ ဦးစားမပေးပါ...ဆရာချိုမနားလိန်း (Singapore COS, Nov-2013) ရည် ရွယ် ချ က် ဤ၀ဘ် ဆိုဒ်ကိုခရစ်တော် အား
13. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 13/23 အဆိပ်ပြင်းသောမြွေ၊ အဆိပ်ရှိဧရာမပင့်ကူကြီး၊ မိချောင်းများ ရှိသော် လည်းစခန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆေးအိတ် ကျော် ပိုး သွားလာလုပ်ကိုင်စဉ် ဘေးကင်းခဲ့ပါသည် ။ ငှက် ၊ သားငါး၊ ပုဇွန်၊ တိရိစ္ဆာန်များ နှင့် သဘာဝမပျက် မစီး ရှိနေသော နိုင်ငံဖြစ်သည် ။ စိုက် ပျိုး၊ မွေးမြူရန်ပင် မလိုပဲ သဘာဝအပင်များဖြင့် စားသောက် နိုင်ပြီး၊ ငါးပုဇွန်ပေါများလှသည် ။ အမှုတော် ထမ်းရွက် ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း အစဖြစ်သည် ။ ဘုရားသခင်သည် သတ္တဝါတို့ကိုအသက် ရှင်နေထိုင်နိုင်ရေးအျွှက် လိုအပ်သည့် အရာများနှင့် တော် တောင်၊ ရေမြေ၊ သဘာဝကို ဖန်ဆင်းပေးထားကြောင်း (ဆာ ၁၀၄)၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ နိုင်ငံရောက် သောအခါ ကျွ န်တော် ပို၍ သဘောပေါက် နားလည် လာခဲ့သည် ။ ဇိုင်ယာနိုင်ငံ (အာဖရိက) ပါပူးဝါနယူဂီနီရေနံရှာဖွေရေးအလုပ် မှတဆင့် သာသနာပြုလုပ်ငန်း အားကြီးမှုဖြင့်၊ အမေရိကန်နှစ်ခြင်းသာသနာပြုအဖွဲ့ဖြင့် စင်ကာပူ၊ ဆရာဂမ်မှတဆင့်ဆက် သွယ် ရာ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖိလာဒဲဖီးယား သို့ လူတွေ့သွားရောက် ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး၊ အမေရိကန်မှတဆင့် အာဖရိက၊ ဇိုင်ယာနိုင်ငံ (ယခုကွန်ဂိုဒီမိုကရက် တစ်နိုင်ငံသို့) ၁၉၉၃ ဇူလိုင်လတွင် ထွက် ခွာလာခဲ့သည် ။ ဇိုင်ယာနိုင်ငံသည် စစ်အာဏာရှင်ကြီး မိုဘူတူ(၃၅)နှစ်ခန့် အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်နေသဖြင့် အာဖရိကတွင် နံပါတ် (၃) အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံမှကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သော ယခင်ပြင်သစ်ကိုလိုနီနိုင်ငံဖြစ်သည် ။ သယံဇာတကြွယ် ဝပြီး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများပြားလှသည် ။ စစ်အာဏာဖြင့် အုပ်ချုပ်ရာမှ အမြဲမငြိမ်သက် ပဲ၊ သာသနာပြုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပင် အသိပေးနိုင်ခြင်းမရှိ၊ အရေးပေါ်အခြေနေ၊ မြို့တော် လေဆိပ်ပင် ပိတ် ထားရချိန် ဒေါက် တာဖေမြတ် ဝင်း ဇိုင်ယာနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်း Brazzaville နိုင်ငံမှတဆင့် ကွန်ဂိုမြစ်ကိုဖြတ် ကျော် ပြီး၊ သာသနာပြုဆေးရုံသို့ ရောက် ရှိသွားခြင်း၊ ပြင်သစ်စကားတစ်လုံးမှမတတ် ပဲ စစ်တပ်၊ စစ်သားများ ကြီးစိုးသော အာဖရိကအငြိမ်မသက် နိုင်ငံ၊ အကျ င့်ပျက် ချစားမှုများဖြင့် သက် ၀င်ယုံကြည် သော စာရေးသူဝါသနာရှင်များ စုပေါင်း၍ တည် ဆောက် ထားပါသည် ။ လွတ် လပ်စွာ တွေးခေါ်ပြီး သင့်လျှော် သော စာများအားဖေါ်ပြရန်ဖြစ်ပါသည် ။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော် နှင့် ဘုန်းတော် ထင်းရှား စေရန် အဓိက ရည် ရွယ် ပါသည် ။ facebook.com/murann.ezine မုရန် ဆိုသည် မှာ ဘုရားအား ပူဇော် ရမည့် အရာဖြစ်သည် ။ "သူငယ် တော် ကိုတွေ့မြင်လျှ င် ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ် ၍ မိမိတို့ ဘဏ္ဍာ ဥစ္စာ တို့ကိုဖွင့်ပြီးမှ လောဗန် နှင့် မုရန် တည်းဟူသော နံ့ သာမျိုးကို၎င်း ရွှေကို၎င်း၊ ဆပ်ကပ် ပူဇော် ကြ၏" - မဿဲ ၂း၁၁ MURANN=Myrrh (Inspired word) .. Google.group Spiritual Links by MURANN - စာအုပ်များ eBooks Daily Bread (နေ့စဉ်ခွန်အား) The Lord's Word (သခင့်စကား)
14. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 14/23 ပြည့် နှက် နေသော အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူရှာမတွေ့နိုင်သော ဇိုင်ယာနိုင်ငံ ဗန်ဂါမြို့၊ သာသာနာပြုဆေးရုံသို့ အံ့ သြဘွယ် အခက် ခဲမရှိရောက် သွားသည် ။ သာသနာပြုခရီးအစတွင် အသိပညာ၊ အတတ် ပညာရှိရုံဖြင့် အမှုတော် ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း၊ ကျွ န်တော့ မှာလ်းအစေခံရန်အရည် အချင်းမရှိကြောင်း မသိသေးပေ။ သင်ခန်းစာများစွာ တွေ့ကြုံရသည် ။ အမေရိကားမှထွက် ခွာစဉ် ဆရာတော် ဂျမ်းနှင့်ဇနီးက ပေးလိုက် သော စာကိုဖတ် ရင်း ဒူးထောက် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခဲ့ပါသည် ။ - ချစ်သား၊ မနက် ဖန်အတွက် မစိုးရိမ်နှင့် - ဘဝ၏အသစ်သော စိန်ခေါ်မှုကိုမကြောက် နှင့် - သင်နားမလည် ရုံနှင့် စိတ် ပျက် စရာအကြောင်းမရှိလှပါ - သင် မသိသည့် အရာများကိုငါသိတော် မူသည် - ထို့ကြောင့် သင့်အား တာဝန်ချထားရာသို့ ရွှင်လန်းစွာ သွားပါ - ငါ၏ ဂတိတော် မှတစ်ပါး အခြားဘယ် အရာကိုမျှ သင်မလို - ဘယ် နေရာ၊ ဘယ် အရပ်သို့ သွားရသည် မဆို၊ ငါသည် သင့်ရှေ့မှ သွားလျှ က် ရှိကြောင်း သိရှိထားရန်သာ လိုအပ်ပါသည် ....။ - ခွဲစိတ် ဆရာဝန်-အမှုတော် ထမ်းဆောင်ခြင်း တာဝန်လွှဲပေးမည့် ခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကြီး ဒမ် ထံမှလေ့ လာ၊ မှတ် သားမှု တစ်နှစ်အကြာတွင် တာဝန်လွှဲသည် ။ ခက် ခဲလှသော မတတ် မဖြစ်သည့် ပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုအပြင်းထန်သင်ယူခဲ့သည် ။ အမေရိကန်ဆရာဝန်တစ်ဦး စတင်ခဲ့သော ကုတင်၄၅၀ဆန့်၊ ဇိုင်ယာနိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံး၊ ပစ္စည်းအစုံလင်ဆုံး သာသနာပြုဆေးရုံကြီး၊ ၁၂နှစ်ကြာမည့် ဝိညာဉ်ခရီးအစဖြစ်သည် ။ ယခင်က မြန်မာပြည် ထက် အစစ သာလွန်သော နိုင်ငံများသို့ သွားလာခဲ့စဉ် စိတ် အားငယ် ရသော် လည်း၊ ယခုအခါ အစာရေစာ ရှားပါးလှသော၊ ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲမွဲတေဆုံး၊ စရိုက် ကြမ်းတမ်းသော စစ်အုပ်ချုပ်သည့် ဇိုင်ယာနိုင်ငံသို့ ရောက် သွားပြီး အမိမြန်မာနိုင်ငံအတွက် စိတ် အားတက် မိသည် ။ (၁၉၉၃ ခုမှ၁၉၉၅ နှစ်တွင်ဖြစ်သည် )။ သာသနာပြုဆေးရုံတွင် လူနာကိုခေတ် မှီဆေးဖြင့်ကုစားသည် ထက် စိတ် ၊ ဝိညာဉ် မြင့်ကုစားခြင်းက ပိုမိုအောင်မြင်ကြောင်း၊ အတူရှိနေသော Daily Supper (ညစဉ်ခွန်အား) နေ့စဉ်မျှော် လင့်ချက် .. မြန်မာပြန်၁၀၀ (စာအုပ်) Burmese.Hymn HCF Myanmar (Singapore) http://hcfsg.blogspot.com/ ဇော် ဂျီနှင့်ယူနီကုတ် MASS READINGS 1: Wis 8:2-7,16-18 R: Ps 16:5-9,11 G: Mt 5:13-19 Listen·Reflection CatholicContent.com ဘာကိုကြိုက် သလဲ။ မဲလေးပေးပါ မုရန် POLLS ၀ိညာဉ်ရေးရာ ဗဟုသုတ ကာတွန်း ဟာသ ရသ
15. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 15/23 ခရစ်ယန်ဘုန်းတော် ကြီးများ အရေးပါမှုကိုလက် တွေ့သိရသည် ။ (၃၅)နှစ်လုံး သာသနာပြု၊ ခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက် တာဒင် ပင်လျှ င် စာတန်၏တိုက် ခိုက် မှုများစွာ ခံရသည် ။ လူတို့၏ ကဲ့ ရဲ့ပြစ်တင်၊ ထိုးနှက် ခြင်းကိုခံကြရသောအခါ ကျွ န်ုပ်တို့ စေ့စေ့ကြည့် နေရမည့် သူမှာ ခရစ်တော် ပင်ဖြစ်ပါ၏။ ထိုသခင်ကဲ့ သို့ ရှက် ကြောက် စရာ ကောင်းသောအရာကိုမမှုဘဲ (ဟေဗြဲ ၁၂း၂) အထက် တော် မှ ခေါ်တော် မူခြင်းနှင့် ဆိုင်သောဆုကိုရခြင်းငှာ ပန်းတုံးတိုင်သို့ ပြေးကြပါစို့ (ဖိ၃း၁၄)။ နောက် ဆုံး စစ်အာဏာရှင်ကြီးမိုဘူတူအစိုးရအား ပြည် နယ် များမှ ဝိုင်းဝန်းတိုက် ခိုက် သော ပြည် တွင်းစစ်ဖြင့် ဖြုတ် ချလိုက် သည် ။ စစ်အာဏာရှင် စစ်ဗိုလ် ချုပ်ကြီး သေဆုံးသွားရှာသည် ။ တိုက် ခိုက် အနိုင်ရသော အစိုးရလည်းကောင်းမလိုနှင့် မထူးမခြားပါ။ တော် လှန်ရေးစစ်ဗိုလ် နှင့်တပ်များ ဆေးရုံတွင် သောက် စား၊ ရမ်းကား၊ သေနပ်ဖောက် ပြီး သာသနာပြုများကိုရန်လို၊တိုက် ခိုက် ချိန်၊ အားလုံး ကြောက် ရွံ့၊ နှုတ် ဆိတ် ၊ ပြောသမျှခံနေရချိန်တွင် ဗီယက် နမ်စစ်တွင်း နှစ်များစွာ၊ သာသာနာပြုခဲ့သော ဂျာမန်ဘုန်းတော် ကြီး၏ ရဲရင့်စွာပြန်ချေပစကားနှင့် တည် ငြိမ်မှုမှာ အံ့ သြဘွယ် ဖြစ်သည် ။ ပြည် သူများ ဆင်းရဲဆဲဖြစ်သည် ။ ခရစ်တော် ဘုရား၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အာဖရိက ပြည် သူတို့၏ နှလုံးသားများတွင် အမြစ်တွယ် လာမှသာ ငြိမ်းချမ်းသာယာ ဝပြောနိုင်ကြပါမည် ။ ထိုသို့ဖြစ်ရန် နောက် ထပ် အနှစ်(၅၀) စောင့်ရမည် ဟုဆိုနေပါသည် ။ ဒေါက် တာ ဒင်ဖောင်တိန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝက Wall Street Journal မဂ္ဂဇင်ကြီးက အနာဂါတ် အလားအလာအကောင်းဆုံးလူငယ် အဖြစ် ရွေးခံရဖူးသည် ။ အလားတူအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာသော နစ်ဆင်၊ ကနေဒီတို့လည်းအလားအလာရှိသော လူငယ် အဖြစ် အရွေးခံရဖူးသည် ။ ဒင်ဖေါင်တိန် ကတော့ ခရစ်တော် ရဲ့ အစေခံဘဝကိုရွေးချယ် ပြီး အာဖရိက တောရွာလေးတစ်ခု၌ မိမိဘဝကိုမြှပ်နှံခဲ့ပါသည် ။ ဒေါက် တာဖေမြတ် ဝင်း တို့၏ သာသနာပြုအဖွဲ့သည် သေဘေး၊ စွပ်စွဲမှုများ၊ လုယက် မှုများ၊ ထောင်ချမှုများမှကြံကြံခံ၊ လွတ် မြောက် ခဲ့ခြင်းသည် ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော် ဖြစ်သည် ။ အိုး.. အကျွ န်ုပ် ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကျေးဇူးတော် ကိုအစဉ်မပြတ် အမြဲချီးမွှမ်းပါမည် (ဆာ ၃၀း ၁၁-၁၂)။ VOTE RESULTS သုံးသပ်ရန်ဗဟုသုတ မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအတွက် ... 15.07.14 လက် ရှိမြန်မာ၊ နိုင်ငံရေုးဖြစ်ပျက် ��... More detail ရစ်ယာန် ဘာသာဝင် တို့၏ အမှတ် အသားဖြစ်�... 12.07.14 Princess Srinagarindra Award ပေးအပ်ပွဲတွင် ထိုင်းဘုရ��... More detail အင်းစိန် MIT ဓမ္မတက္ကသိုလ် က စာပေဟောပြော... 08.07.14 လင်းသိုက် ညွန့် (မြန်မာ့ မြေ) ... More detail ရန်ကုန်မြို့လယ် ကသမိုင်းဝင်ဂျူးဘုရ�... 30.06.14 “ကွင်းပြင်ထဲက သစ်ပင်တပင်ဟာ အထီးကျ န��... More detail စိန့်သြဂတ် စတင်း (အေဒီ
16. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 16/23 ဝိညာဉ်ရေးခွန်အားယူရန် အလွန်ကောင်းသော အပိုင်း(၂) ကို ဒေါင်းလုပ်ဖတ် နိုင်ပါသည် ။ အံ့ သြဘွယ် ကမ္ဘာ့ အဆင့် မြန်မာ့ သာသနာပြုတစ်ဦး အာဖရိက (၁၂)နှစ်တာ အံ့ သြဘွယ် ဝိညာဉ်ခရီးမှတ် တမ်း အခန်း (၁-၇)အထိတင်ပြလိုပါသည် ။ အစ-အဆုံး စာအုပ် အပိုင်းခန်းပေါင်း၄၀ စာအုပ်ကိုမှာကြားလိုသူများ ဒေါက် တာဖေမြတ် ဝင်းထံ ဆက် သွယ် ပါရန်။ ဖုန်း - +၉၅ ၉၅၀၂၈၈၅၈ http://www.mediafire.com/view/35fvpumwwsoirji/dr.pemyat.win2.pdf (9.3MB) http://www.mediafire.com/view/g2i5vuzvcg11nic/dr.pemyat.win3.pdf (8.9MB) FOOTER MONTHLY ARTICLES & WEB.BLOGS ၀ိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာလစဉ်ရွေးချယ် ထားသောမုရန်ဆောင်းပါးအချို့ ဘုရားသခင် ရောင်းပါသလား? .. တစ်ဒေါ်လာပဲတဲ့ 19 Dec 2012 သင်ခန်းစာ အမှတ် (9) ယေရှုခရစ်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက် တော် မူခြင်း ၄င်း၏ခိုင်လုံသောအထောက် အထား တန်ခိုးနှင့် ရည် ရွယ် ချက် 10 Nov 2012 သင်ခန်းစာ အမှတ် (၈) သခင်ယေရှုခရစ် အသွေးတော် ၏တန်ခိုး 06 Nov 2012 မင်္ဂလာတရားတော် (၁) - လှမင်းသူ 24 Jul 2010 လက် ထပ်ပြီးသည့် အထိစောင့်ပါ (or) ဒုတိယမြောက် အပျိုစင်ဘ၀ ရဲလင်းထွန်း(အင်းစိန်) 03 Apr 2012 ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း Practical Christian Living Course ရဲလင်းထွန်း(အင်းစိန်) 23 Apr 2012 Give Up, Be Still and Silent လက် လျော့ ၊ တိတ် ဆိတ် ၊ ငြိမ်ဝပ်စွာနေ - စောပက် ထရစ် 12 Dec 2012 အဖေါ်မဲ့ခြင်း၊ အထီးကျ န်ခြင်း (Loneliness) - Biligram (Part II) 11 Nov 2012 ဘုရားသခင်ကိုကြောက် ရွံလေးစားခြင်းမရှိသူများအကြောင်း - လောမဲ02 Feb 2012 ၃၅၄-၄၃၀) ST. AUGUSTINE ... 09.06.14 ရောမအင်ပိုင်ယာကြီး ပြိုပျက် ချိန်မ�... More detail ILBC ဦးတင်မောင်ဝင်း - မြန်မာ့ ပညာရေးကိ��... 30.05.14 လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅နှစ်လောက် က ... More detail မြန်မာပြည် မှာ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘ... 30.05.14 Kyaw Min Swe May 23 near Yangon, Myanmar · Edited မြန်မာပြည် ... More detail Church Of England Against Halal-Islamization Of UK 30.05.14 Sunday, May 18, 2014 (Vicar Eric Wood’s article from the WESTERN GAZETTE UK on 18 May 2014.) ... More detail နောဧခေတ် တွင်ရှိခဲ့သော “နေဖီလင်လူဘီ... 17.05.14
17. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 17/23 လူ၏နာမည် များ - ဦးအူလုံအောင်ဂျာ 28 Nov 2011 Forgotten GOD (ပျောက် နေသောဘုရား) by Chris 22 May 2012 စင်ကာပူမှဆောက် လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့်မြန်မာများ - မောင်သာမန် 27 Jan 2012 (ဗဟုသုတ) နာကျ ည်းမှုကင်းရှင်း၊ပပျောက် ခြင်းအချိန် (ဗီယက် နမ်စစ်မှဓါတ် ပုံနှင့်ယခုဘ၀) Kim Phuc 27.Aug.2010 မြန်မာပြည် ကိုချစ်ပါ။ (အမျိုးသားရေးအတွက် ညီညွတ် ရန်အချိန်ရောက် လာခြင်း) - ဇော် အောင် 16 Oct 2011 ယုံကြည် သူ၏ထာဝရလုံခြုံစိတ် ချမှုဆရာစောစံအောင် (Rev) Updated: 31 Jan 2011 ဦးတင်မောင်ထွန်း၏ တရားဟောချက် များ (ညီအစ်ကိုများအသင်းတော် - ရန်ကုန်) 12.Apr.2011 ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်း၏ စကားကြီး၇ခွန်း သင်းအုပ်ဆရာ-ခေါင်ဟီး (City Harvest, Sg) 22.Apr.2011 ဆရာဒေးဗစ်လား ..7Mountains by David Lah David Lah 08.Nov.2011 Rev. ဆရာဦးကျော် ၀င်း - တရားဒေသနာ Little Myanmar Rev.U Kyaw Win 06.Apr.2010 ထာဝရဘုရားကိုမြင်ရန် Dr. Ramond Mu 13.Mar.2010 ကိုထူးဆန်း မှတ် တမ်းများနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်း လှမင်းသူ 31 Jan 2012 မခြားမလပ်ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း စောသြဂတ် စတပ် (Rev) 10.Jan.2011 အမှိုက် The Law of Garbage Truck မင်းအောင်သက် လွင် 06.11.10 ဓမ္မပညာအထောက် အကူပြု လစဉ်စာစောင် May-2011 ဥိးဇော် မင်း (Rev, Dr) 04.05.11 ၀န်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ ထံသို့လာကြလော့ ။ S. စိုးလွင် 08.03.10 နိုင်ငံတော် နှင့်ဖြောင့်မတ် ခြင်း - ပြည် ပရောက် မြန်မာ-သင်းအုပ်ဆရာ (၁) စောသြဂတ် စတပ် (Rev) 09.02.10 ညစဉ်ခွန်အား - ဆရာဆိုးနှင့် မုရန်နံသာ ဆိုး 01.02.10 ပညာမတောက် တခေါက် နှင့် ယုံကြည် ခြင်း ဇော် အောင် 07.01.10 ဒမာသက် သို့ သွားရာလမ်း လှမင်းသူ 02.02.10 ဆုန်သင်းပါရ်၊ အဆိုတော် ဘ၀ခရီးလမ်း - ကိုယ် တိုင်သက် သေခံချက် ဆုန်သင်းပါရ် နောဧခေတ် တွင်ရှိခဲ့သော “နေဖီလင်လူဘ��... More detail အရည် ချ င်းစစ်ဆေးခြင်း (မြန်မာလူသားအ��... 12.05.14 http://murann.com/attitude.htm (အရည် ချင်းစစ်ခြင်း-၂) ... More detail ဖတ် ရန် ဒီဗွီဒီ၊ ချီးမွမ်းသီချ င်း၊ DVD Prais Song Music -... 20.05.12 More detail မုရန်ကူညီလုပ်ကိုင်သူများ - စင်ကာပူပ�... 06.12.11 More detail ပန်းကလေးများမနွမ်းစေချ င် - သံလျှ င်ေ�... 27.11.11 သံလျှ င်ဖေသွင် အသက် ၂၅နှစ်ကျော် ကျော် အမျိုးသမီးငယ် တဥ�... More detail မုရန်အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၃) ရန်ကုန... 19.11.11
18. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 18/23 01.03.10 မိမိနှင့် အခြားသူနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ခိုင်းပါ ရစ်ဝါရင် 20.01.10 Rev. ဆရာဦးကျော် ၀င်း - တရားဒေသနာ Little Myanmar ဦးကျော် ၀င်း (Rev, Dr) 30.01.10 တေးဂီတဖြင့် တေးရေး၊ သီဆို၊ ချီးမွမ်းသူများ - ဆရာလတ် ယေရှဲ ဦးလတ် ယေရှဲ (Rev, Dr) 04.02.10 ငါ့ သိုးတို့သည် ငါ့ စကားသံကိုနားထောင်၍ ငါ့ နောက် သို့ လိုက် ကြ၏ ဇော် သူလင်း (Rev) 01.02.10 မင်္ဂလာတရားတော် (၁) လှမင်းသူ 30.06.10 ချီးမွမ်းခြင်း - ဂီတမှုး၊ Photo of New.Year 01Jan-2010 ရဲဝင့်လတ် 09.03.10 ဆရာဒေဗစ်လားနှင့်နှလုံးသားအိမ်မှ၊ထာဝရဘုရား၏နာမတော် များ ယုဒသန်အသင်းတော် (SG) Updated: 25 Jan 2012 ခရစ်တော် သည် ကျွန်ုပ်၌ ရှင်တော် မူသည် အန်ဒရူး Updated: 02 Mar 2010 Our Friendly Web & Blogs Links jbcs.org.sg/main woorank.com/en/www/sawpatrick.net moemaka.com/2012/06/guest-writer-ပြည် သူတို့လိုချင်နေတ spiritlessons.com/languages/index.htm thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html mahnkoko.blogspot.com.au divinerevelations.info/languages/index.htm mcathailand.com myanmarinsingapore.com karenfamily.org/profiles/blogs/links-1 zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html tudoenkung.wordpress.com/online-bibles burmesebible.com/links.htm jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html laaituibaptistchurch.com mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html mcflondon.com dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html မုရန်အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၃) ရန်ကုန်မြို့တွင် ထုတ်ေ�... More detail ခရစ်ယာန် ပုံသက် သေပြ၊ လက် ဆောင် 06.11.11 ဖြစ်ရပ် (၃) 10 April 2008ဆန်ဖရန်စစ္စမြို့တွင် ကားငှားပြီး ဂိုး��... More detail စာအုပ်ကြော် ငြာ် ခြင်း - Why did God create man? 03.11.11 ဦးအူလုံအောင်ဂျာ အမှုတော် ကို မြန်မာပြည် ၊ လားရှိုးမြို�... More detail မင်းအောင်သက် လွင် - ရေးသားစီစဉ်ထုတ်ေ�... 30.10.11 minaungthetlwin@gmail.com More detail ဆရာဒေးဗစ်လား ..7Mountains by David Lah 28.10.11 ကမ္ဘာလှည့် ပြီး၊ မြန်မာလူစုထဲသာမက - အင်္ဂလိပ်စကားပြောန��... More detail
19. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 19/23 imcwheaton.org kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html sawpatrick.net shinthan.com bangkokchristchurch.net batupuei.webs.com burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html globalmcf.ning.com intouchcnet.com karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117 kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html mcctulsa.com mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html mmwebgallery.com nlbcusa.wordpress.com sawchit.blog.com/2011/06/12/ကျီးတို့အလယ် မှ-ဒေါင်း sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html thelordword.com tkbc-japan.net bangkokchristchurch.net haineni.ning.com bangkokchristchurch.net globalmcf.ning.com/ thawthikho.blogspot.com orangeask.com miccfortwayneusa.blogspot.com mcflondon.com kokomaunguk.blogspot.com mission-one.co.cc chanlinnay.mandalaybloggers.org thespiritfruit.com mg-m.blogspot.com ကျ မ်းစာလေ့ လာနည်းများ mcbc4u.blogspot.com မုရန်ဆောင်းပါးအချို့. www.myatmingalar.com/ မြတ် မင်္ဂလာဒေသနာများ myanmar-odb.org နေ့စဉ်ခွန်အား(မြန်မာ) Ref: http://www.alexa.com FACEBOOK TWITER GOOGLE BUTTONS Share 1 ကျ မ်စာလေ့ လာခြင်း အသစ်သော မွေးဘွားခြင်း - A New Birth (ဆရာအောင��... 21.03.14 အကန်ဆိုသည် ဟု ပြန်၍မိန့်တော် မူ၏'' (ယေ��... More detail ဘဝပြဿနာများအတွက် လမ်းညွှန်အကြံပြုသည� 08.02.14 ဘဝပြဿနာများအတွက် လမ်းညွှန်အကြံပြုသ��... More detail သင်ခန်းစာ (၂၀) မင်္ဂလာရှိသော ကယ် တင်ခြင�... 03.02.14 နိဒါန်း လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းမျာ... More detail ဘုရားအလိုတော် အတိုင်း ကိုးကွယ် ကြသူမ... 16.01.14 အန်ဒရူး သင်ခန်းစာ (၃) ဘုရားအလိုတော�... More detail Bible Gateway - အဖတ် အများဆုံးကျ မ်းပိုဒ်၅ခု
20. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 20/23 ချီးမွမ်းတေးသီချ င်းနှင့်ကဗျာများ (RANDOM HYMN NO.1) Key C - မြန်မာပြည် အတွက် ခရစ်တော် ဖြစ်ရမယ် မြန်မာပြည် သားတိုင်း ခရစ်တော် သိရမယ် ယုံကြည် ချက် ဆုံးဖြက် ချက် ချရင်းဆောင်ရွက် မယ် တို့လက် တွေ ညီညွတ် စွာ ရှိနေမယ် - သာသနာအတွက် အသင့်ရှိထားရမယ် သာသနာခရီးအတွက် တို့ တတွေဆက် ကပ်မယ် သခင်ဘုရား ပေးအပ်တဲ့ ၀တ္တရားကျေ ဘို့ ကွယ် တို့လက် တွေ ညီညွတ် စွာ ရှိနေမယ် Cho; လူတွေမျှော် လင့် စောင့်စားနေချိန် သခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်း ကယ် တင်ခြင်းတွေကို ကြားရလို့ရင်မှာ ထာဝရတွယ် ညိသွားအောင် ကြိုးစားမယ် သာသနာခရီးမှာ ချီးမွမ်းတေးသီချ င်းနှင့်ကဗျာများ (RANDOM HYMN NO.2) ဆရာဦးညွန့်လှ (သီချင်းနောက် ခံ) .. ချစ်စွာသောမိတ် ဆွေ၊ ...သီချင်းလေးကတော့ မေတ္တာနဲ့ အသက် ရှင်ဖို့ သတိပေးနေပါတယ် ။ မေတ္တာအကြောင်းတွေကိုပါးစပ်ကသော ပြောတတ် ပြီး၊ လက် တွေ့မပြနိုင်တဲ့ ကျွ န်တော် တို့ အသက် တာမှာ ဆင်ချင်စရာပါ။ ဒီကနေ့ ကျွ န်တော် တို့ရဲ့ အသက် တာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့် ရင် Read more... Link 31.12.13 1. Jeremiah 29:11 ယေရမိ၂၉း၁၁ တဖန် မိန့်တော် မူသ... More detail ခရစ်စမတ် တွင်မွေးဖွားသောယေရှုအကြောင� 22.12.13 “ယေရှုခရစ်၏ဘုရားဇာတိ” The Deity of Jesus Christ “နိ�... More detail သင်ခန်းစာ အမှတ် (9) ယေရှုခရစ်၏ ရှင်ပြန��... 18.11.13 “နိဒန်း” သခင်ယေရှုခရစ်သေခြင်းမှရ�... More detail သင့်နေ့ရက် အချိန်နာရီ http://timeanddate.com/ ဆရာစံတိုး- ခရစ်တော် ကောင်းမြတ် ခြင်းအကြောင်း သခင်ယေရှုကို၁၉၈၂တွင်ယုံကြည် ခဲ့သူ၊ ဓမ္မဆရာ (12 min) JESUS MOVIE - ယေရှုဘ၀ဖြစ်စဉ်
21. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 21/23 ချီးမွမ်းတေးသီချ င်းနှင့်ကဗျာများ (RANDOM HYMN NO.3) Because He Lives God sent His son, they called Him Jesus He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon, An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, All fear is gone. Because I know He holds the future, And life is worth the living just because He lives. ယေရှုရုပ်ရှင် (မြန်မာစကားပြော) Jesus Movie - Burmese Language Substitute ကိုးရီးယားတဲလင့် Korea Talent မှာမိဘမဲ့၊ ၁၀နှစ်ကျော် ဆင်းရဲစွာကြီးပြင်းလာတဲ့ လူငယ် လေးရဲ့ သီဆိုချီးမွမ်းသံဟာ နှလုံးသားကိုထိပါတယ် ။ ဒီသူငယ် ရဲ့ရှေ့ရေးဘ၀မှ ပျော် ရွှင်မှုများရပါလိမ့်မယ် ..လို့..ဒိုင်လူကြီးရဲ့ပြောပါတ သို့သော် လောကဒဏ် များဖိစီးမှုခံရတဲ့ စာမသင်ကြား၊ လမ်းကြိုလမ်းကြားနေခဲ့ရသူအတွက် ခရစ်တော် ရဲ့မေတ္တာကပဲ သူကိုဝမ်းမြောက် စေမှာပါ။ Homeless Boy Steals The Talent Show (TheInterviewWitGod.com)
22. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 22/23 ဒို့ဗမာပြည် ကိုချစ်ကြပါ၊ ဗမာပြည် ကြီးကို-ကောင်းကြီးပေးပါ၊ ကိုဖိုးခွားနှင့်မြန်မာခရစ်ယာန်ဂီတပညာရှင်များ God bless MYANMAR! နှစ်ပေါင်းများစွာ ချီးမွှမ်းခြင်းတေးရေး၊ ဂီတဆရာ ဦးစောရူဘီRuby မိသားစု ဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာပို၍သွန်းလောင်းပါစေ။ . ရှာရန် SEARCH Search TO ESCAPE OR PREVENT THE SLAVE OF MONEY ငွေကျေးကျွ န်ဘဝမှလွတ် ရန်
23. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 23/23 ဤ၀ဘ် ဆိုဒ်မှဆောင်းပါးများကိုမိမိလိုအပ်သလိုကူးယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ထိုသို့ ပြုရာတွင် ဆောင်းပါးရေးသားသော စာရေးဆရာများကို လေးစားသောအားဖြင့် ၄င်းတို့၏အမည် နာမများကိုပါ တပါးတည်းဖော် ပြပေးပါလျ င် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည် ။ MURANN MAGAZINE, Phone: +65 8282 2795 Email: contact@murann.com ငွေကြေးနှင့်ပတ် သက် သော ဘုရားဥပဒေသ Faith and Prosperity လူအများစု ၀င်ငွေကောင်းလာချိန် ငွေတက် မက် သူဘဝသို့ ရောက် သွားလေ့ ရှိသည် ။ ငွေကိုတက် မက် ခြင်းသည် မကောင်းမှုမျိုးစုံး၏ အရင်းအမြစ်တည်း.. ၁တိ၆း၁၀ For the love of money isaroot